यी हुन् शरीरमा आएका छालाका डल्ला हटाउने घरेलु उपाय – Dainik Samchar
यी हुन् शरीरमा आएका छालाका डल्ला हटाउने घरेलु उपाय
August 23, 2021 375
– चुक अमिलोले यी डल्ला हटाउन मद्दत गर्छन् । एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो) ले सजिलै डल्ला हटाइदिन्छ ।.
नोटः डल्ला हटाउने एप्पल साइडर भिनेगर (स्याउबाट बनेको चुक अमिलो) आयुर्वेद औषधालय, डिपार्टमेण्टल स्टाेर तथा बजारमा पाइन्छ ।
Prevनेपाली महिला प्रविणा र दीपा भारतमा समातिए : चेकजाँच गर्दा एसएसबीनै चकित
Nextअन्तत टिकटक स्टार स्मारिकाको भयो डिर्भोस , सम्वन्ध अन्त्य हुनुको कारण के होला ?
आफ्नो डिभोर्सको बारेमा पहिलो पटक रुँदै बोलिन चर्चित टिकटकर स्मारिका ढकाल (भिडियो हेर्नुस्) (820)